ကြာကြာလေးနဲ့ နာနာလိုး (စဆုံး) – Grab Love Story
`ဘွတ် ဘွတ် ဘွတ် ´´
ဖတ် ဖတ် ဖတ် ´´ အားးး အားးအ´´
ဘွတ် ဘွတ် ဘွတ် ´´ ပက်လက် လှန် လိုးခံနေသော ဝါဝါ စောက်ပတ်ထဲမှ လီးတံ ကို ချွတ်ပစ်လိုက်တယ် ။ အာကိုကြီး လုပ်လေကွာ ဘာလိုချွတ်ပစ်တာလဲ ´´
ဝါ့ ဖင်ကိုကြည့်ပီး လိုးချင်လို့ ဖင်ကုန်းပေးပါလားနော် လေးဘက်ထောက်လိုက်လေ ´´ အာ အဲ့လို ကြီး မလုပ်ပေးချင်ဘူးကွာ ´´
လုပ်ပါ ဝါ ရယ် ဝါ့ ဖင်ကြီး ကို ကြည့်ပီး လိုးချင်တယ်နော် ´´ မင်းဇော် ဝါဝါ့ ကို ခါးမှ ကိုင်ကာ မှောက်ပေးလိုက်ပီး တင်ပါးကြီး ကို အပေါ် ကို ဆွဲယူလိုက်တယ် ။ ဝါဝါ တစ်ယောက် ညင်းနေသော်လည်း ဖင်ကုန်းလျှက် သား ဖြစ်သွားပီ ။ ရှင်းရှင်း ပြောရလျှင် ဝါဝါ အလိုးခံနေရပေမယ့် ဖင်ကြီး ကုန်းမထားချင် ။ ရှက်လည်း ရှက်နေသေးသည် ။ တသက်လုံး ဘယ်သူမှ မမြင်အောင် ဖုံးကွယ် ထားတဲ့ ဖင်ကြီး တပါးသူ ရှေ့မှာ လေးဘက်ကုန်းကြီး ဖြစ်နေသည် ။ အပျိုတစ်ယောက်မို့ အရှက်တော့ မကုန်သေးပါ။ သို့ပေမယ့် အခုတော့ ဖင်ကုန်းလျှက်သား ဖြစ်နေပီ ။ မင်းဇော်ကလည်း ဝါဝါ့ ဖင် နောက် မှ ကျကျ နန နေရာယူပီး လီးဒစ် တံကြီး ကို အဖုတ်ဝမှ တေ့လိုက်သည် ။ လုံးဝန်းသော ဖင်လုံးကြီး ကို ကိုင်ထားရသည်မှာလည်း အနှစ်အရသာ ရှိလှသည် ။အရင်နေ့တွေက ဝါဝါ့ ဖင်ကို ထမိန်ပေါ်မှာ ခိုးခိုး ပီး ကြည့်နေရသည် အခုတော့ ဖင်အဖွေးသား မြင်နေရပီး အခုလိုးနေရသည်မှာ မိမိ ရဲ့ ခယ်မချောချော လေး ဖြစ်နေတာ ကြောင့် မင်းဇော် စိတ်တွေ ပိုထန်နေမိသည် တင်ပါး နှစ်ခြမ်း ပေါ်ကို လက်ဖြင့် အသာ ပွတ်ပေးနေရင်း လီးတံ ကို အဖုတ် ထဲ ထိုးသွင်းလိုက်သည် ။ အဖုတ် မှာ ရွဲစိုနေတာ မို့ ချောချောချူချူ ပင် ၀င်သွားသည်။ ဘွတ် ဘွတ် ဘွတ် ´´
အ အ အားး ကိုကြီး ဖြေးဖြေး ´´ အားးးး ဝါ့ ဖင်ကြီး တွေ က မိုက်တယ်ကွာ တုံးခဲနေတာပဲ ´´
ဖတ် ဖတ် ဖတ် ´´ အားးး ကိုကြီး နာတယ် အရမ်းမစောင့် နဲ့ အဲ့လောက် မခံနိုင်ဘူး အားးး ဘွတ် ဘွတ် ဘွတ် ´´
ဖတ် ဖတ် ဖတ် ´´ ဘွတ် ဘွတ် ´´
အားးး ကိုကြီး ကောင်းတယ် အားးး နာတယ် ´´ အင်းး ကိုကြီး စောင့်လိုးပီနော် အားးး´´
အင်းး ကိုကြီး လိုး အားးးလိုးးးးကွာ´´ ဘွတ် ဘွတ် ဘွတ် ´´
ခယ်မလေး ရဲ့ ဖင်တုံးကြီး ကို ကိုင်ပီးလိုးနေရသဖြင့် မင်းဇော် မထိန်းနိုင်တော့ သုတ်ရည်တွေ ထုတ်ချင်လာပီ။ အထုတ်အသွင်း တအား မြန်လာသည် ရှေ့မှ ဝါဝါ ကလည်း တအား အော်နေသည်။
ဖွတ် ဖွတ် ဖွတ် ´´ ဖတ် ဖတ် ဖတ် ´´
ဘွတ် ဘွတ် ဘွတ် ´´ အားးး ဝါဝါ ကိုကွီး ပီးတော့မယျ အားးးး´´
ဘွတ် ဘွတ် ဘွတ် ´´ အားးး ထွက် …ထွက်ကုန်ပီ အားးးး´´
နောက်ဆုံး တစ်ချက် အားကုန် စောင့်လိုက်ကာ လီးထိပ်မှ အရည်တွေကို စောက်ဖုတ်ထဲသို့ ပန်းထည့်လိုက်တော့တယ် ။။
အားးး ကိုကှီး အားးးးး´´ မင်းဇော် ရဲ့ ရှိသမျှ အားတွေ အကုန် ဝါဝါ့ အဖုတ်ထဲ ထိုးထည့်လိုက်ရသလို အားအင်များ ကုန်ခမ်းသွားကာ လေးဘက် ကုန်းထားသော ဝါဝါ ပေါ် ကို မှောက်လျှက် ကျ သွားတယ် ။ လီးတံ ကြီး ကတော့ အဖုတ်ထဲမှာ ရှိနေဆဲ လီးတံကို ဝါဝါ အဖုတ် အတွင်း မှ ဆွဲ ညှစ်နေသလိုမျိုး ဝါဝါ့ အဖုတ် အတွင်း နံရံများ မှ လှုပ်စိ လှုပ်စိ ဖြစ်နေတယ် ။ ဝါဝါ ကတော့ တတောင်ဆစ် ထောက်ကာ မင်းဇော် ကိုယ်လုံးကြီး ကို ထိန်းထားရင်း ပီးဆုံးသွားတဲ့ အရသာ ကို ကောင်းကောင်းခံစားနေတယ် ။ အဖုတ်အတွင်း ထဲမှာ လည်း ပူနွေးနွေး အထိ အတွေ့ က ဘယ်အရာနှင့်မျှ မတူသော အထိ အတွေ့မျိုး ။ ငါးမိနစ်လောက် ငြိမ်နေအပီးမှာတော့ ဝါဝါက ကိုကြီး ဆင်းတော့ကွာ ဝါ လေးလာပီ´´
မင်းဇော် ဘေးသို့ခန္ဒာကိုယ် ကို လှဲချလိုက်သည် ။ အဖုတ်ထဲ မှ လီးတံကြီးက ပလွတ် ကနဲမြည်သံ နဲ့ ကျွတ်ထွက်သွားတယ် ။ ဘေးမှာ ပက်လက်လန်လျှက် အနေအထား ဖြစ်သွားတော့ မှ ဝါဝါ စောင်းငဲ့ကြည့်မိသည် ။ လီးတံ ထိပ်မှာ လဲ အရည်တွေ ရွဲစို ပြောင်လက်နေသည် ။ ဝါဝါ အဖုတ်ကို လိုးပစ်လိုက်တဲ့ လီးကြီး ဝါဝါ အခု မှ သေသေချာချာ ကြည့်မိသည် ။ မနဲမနော ကြီး လှသည် ။ ဒီလီး ကြီး အဖုတ်ထဲမှာ အ၀င်အထွက်ချောမွတ်နေတာကို ဝါဝါ အံ့သြ မိတယ် ။ ဝါဝါ ကုတင်ပေါ်မှာ ဆင်းကာ ရေချိုးခန်းမှာ သန့်ရှင်းရေသွားလုပ်ဘို့ ပြင်လိုက်သည် ။အခန်းထဲမှာ ရှိတဲ့ ရေချိုးခန်းမှာပဲ ပဲ သန့်စင်လိုက်တယ် ။ အဖုတ်အား ရေထိလိုက်တော့ စပ်ဖျဉ်းဖျဉ်း ခံစားရသည်။ သူမ အပျို မဟုတ်တော့ ။ မှန်ထဲမှ ဝါဝါ့ မျက်နှာ ကို ကြည့်မိရင်း ၀မ်းနည်းသလိုလိုလည်း ဖြစ်မိသလို အထိအတွေ့ မှာ လည်း သာယာမိသည် ။ ရေချိုးခန်းမှ တဘက်အဖြူ ကြီးကို ကိုယ်မှာ ပတ် ကာ အခန်းထဲ ပြန်ဝင်လိုက်တော့ မင်းဇော်က မှေးနေတုန်း
ကိုကြီး ထတော့လေ ရေချိုးတော့ ထမင်းပြင်ထားလိုက်မယ်နော် အတူတူ စားမယ် နေ့လည်း ၁နာရီတောင် ထိုးတော့မယ် ´´ ၀ါဝါ က မင်းဇော် ကို လှုပ်နှိုးလိုက်တယ် အင်းးးး ´´
မင်းဇော် မျက်စိ ကို ဖွင့်ကြည့်လိုက်ပီး
ဝါ အရမ်းလှတာပဲ ချစ်တယ် ´´ လက်မောင်းလေး ကို အသာဆွဲယူကာ ပါးလေးအနမ်းတစ်ချက် လှမ်းပေးလိုက်တယ် ။ ဝါဝါ အခန်းထဲမှ အ၀တ်အစားများ ကို ကောက်ယူကာ ထွက်သွားတယ် ။ မင်းဇော်လည်း အိပ်နေရာမှ ထကာ ရေချိုးခန်းထဲ ၀င်ရင်း ရေပန်းအောက်မှာ ဆယ်မိနစ်လောက်ရေချိုးလိုက်တယ် ။ ထမင်းစားခန်းထဲကို ထွက်လာလိုက်တော့ ဝါဝါက ထမင်းစားပွဲ မှာ အသင့်စောင့်နေတယ် ။ မိန်းမ ဘာဟင်းတွေ ချက်ထားတုန်း ချစ်လေး ´´
ကိုကြီး နော် ဘာမိန်းမ လဲ မမကြီး သိသွားမှ ဟုတ်ပေ့နော် အနေအထိုင် ဆင်ခြင် ´´ ကိုကြီး နဲ့ ဝါဝါ တူတူ နေပီးသွားပီ ဆိုတော့ ဝါဝါလည်း ကိုကြီး မိန်းမ ဖြစ်သွားပီလေ´´
သွားပါ လာ ဝါလည်း ဘိုက်ဆာနေပီ စားတော့ ´´ ထမင်းစားရင်း တစ်ယောက်တလဲ ခွင့်ကျွေးလိုက်ကြသေးသည်။ ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ဝါဝါ လည်း ပျော်ပါတယ် ။ စိုးရိမ်စိတ်တော့ ရှိတာပေါ့ အခု လို အပျိုစင် ဘ၀ ကို ပေးလိုက်ရတာက တအိမ်တည်းနေတဲ့ မိမိ ရဲ့ ခဲအိုလေ ။ ထမင်းစားပီး တော့ ဧည့်ခန်းမှာ တီဗီ ထိုင်ကြည့်ကြတယ် ။ ဝေမာလှိုင်က လေး နာရီလောက်မှ ပြန်ရောက်မှာ ဆိုတော့ အေးအေးလူလူ ပဲ နေဖြစ်တယ် ။ ဆက်တီပေါ်မှာ ထိုင်တဲ့ အချိန် မင်းဇော် ရင်ခွင်ထဲမှာ ပဲ ။မင်းဇော်က နို့သီးလေးတွေ ကို ပွတ်ချေပေးရင်း စကားတွေ ပြော ၊ ဝါဝါ ကလည်း မင်းဇော် ရင်ခွင်ထဲမှာ အသာ မှီထားတယ် ။ ဝါ နာနေသေးလား ´´
မင်းဇော် က ဝါ့အဖုတ်နေရာလေး ကို ကိုင်ကာမေးသည်
အင်း သိပ်တော့ မနာတော့ပါဘူး ခုန ကတော့ တအားနာတယ် ´´ အင်းး နောက်ဆို လုပ်ရင်းလုပ်ရင်း မနာတော့ဘူးလေ ´´
ဟင် ..ကိုကြီးက ခနခန လုပ်မှာလား မမ သိသွားရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ´´ မသိအောင် လုပ်မှာပေါ့ မမ ကျောင်းသွားတဲ့ အချိန် ဝါ အတန်းအားတဲ့ အချိန် တွေမှာလုပ်မယ်နော် ´´
ကိုကြီး ဝါလေကြောက်နေတယ် မမသိသွားရင် ပြသနာပဲနော် ´´ အင်း ပါ မသိစေရပါဘူး ဝါ တခါမှ အလိုးမခံဘူးသေးဘူးထင်တယ်နော် ကြပ်နေတာပဲ ဝါ့ အဖုတ်လေးက ´´
၀ါဝါ မျက်စောင်းလှလှ တချက်ထိုးရင်း မင်းဇော်ပေါင်ကို လက်သည်း နှင့် ဆိတ်လိုက်ကာ
ခုန က အတူတူ နေပေးတာ မသိဘူးလား လုပ်ဖူးလားမလုပ်ဖူးလား ဆိုတာ အခု ကိုကြီးက ပထမဆုံးပဲ ´´ အင်း သိပါတယ် ဝါ့ ရဲ့ အပျို ရည်ကို ယူလိုက်ရလို့ ကိုကြီး အရမ်းဝမ်းသာတယ် အရင်ကတည်း က ဝါ့ ဖင်ကြီး တွေကို ကြည့်ပီး လုပ်ချင်နေခဲ့တာ ကြာပီ ခိုးခိုးကြည့်နေရတာ ´´
သွား ကိုကြီး မကောင်းဘူး တော်တော် ဆိုးတယ် ´´ လက်သည်းဖြင့် မင်းဇော် ရဲ့ လီးတံလေး ကို သာသာ လေး ပုဆိုးပေါ် မှ ဆွဲ ဆိတ်လိုက်တယ် အားးးး နာလိုကတှာ ´´
သူကျတော့ နာတတ်တယ် သူများကျတော့ တအားလုပ်တယ် ထပ်ဆိတ်ဦးမယ် ရော့ ရော့ရော့ ´´ အားးးး မလုပျနဲ့ အားးးနာတယျ နာတယျ ´´
၀ါဝါ့ လက်ကိုဖမ်းဆွဲ ရင်း ပုဆိုးကို ဖြေလိုက်ကာ လီး တံ ကိုကြည့်လိုက်တယ် လက်သည်း နဲ့ ဆိတ်လိုက်ကာမှ လီးတံ က ထောင်လာတယ် ။
ဝါ လုပ်လိုက်လို့ ချက်ချင်း ထလာပီနော် ပီး မှ အဆိုး မဆို နဲ့ ´´ ကိုကြီး နာသွားလား ´´
မင်းဇော် လီးတံ ကို လာကိုင်ရင်း ဝါဝါ မေးလိုက်တယ်
ကိုကြီး လီးကြီးက အကြီးကြီးပဲနော် ´´ ရင်ခွင်ထဲမှ နေ၍ ဝါဝါ မင်းဇော် လီး ကို သေချာ ကြည့်မိလိုက်တယ် ။ ဒစ်ကြီး က လည်း ကားထွက်နေတာပဲ လီးတံ ကြီးက သူမ လက်ထဲမှာ အပြည့် ။ ခုနက တုန်းက ဒီလီးကြီး သူမ စောက်ဖုတ်ထဲကို ၀င်သွားခဲ့တာ အံသြမိတယ် ။ ထိုင်နေတာတောင် လီးတံကြီး က အပေါ် ကို ထိုးထောင် ထွက်နေတယ် ။ လီးတံပေါ်မှာ အရေပြားလေးတွေက ပျော့ပျော့လေး မို့ ဝါဝါ ဖြေးဖြေး လေး ဆွဲကြည့်ရင်းဆော့ကစားကြည့်လိုက်တယ်။ အဲ့လို မဆွဲရဘူး ဝါ ရဲ့ လီးတံကို သေချာကိုင်ဆုတ်ထားပီး အပေါ်အောက် ဆွဲရတယ် အပေါ် ကို ဆွဲလိုက်ရင် လီးဒစ် ကို အရေပြား က ဖုံးသွားအောင်ဆွဲ ပီးရင် အောက်ကို ပြန်ဆွဲချ လီးဒစ် ပေါ် လာတဲ့ အထိ ဆွဲချ အဲ့လို လုပ်ပေးရတယ် အဲ့ဒါ ကို ဂွင်းတိုက်တယ်လို့ ခေါ်တယ် ´´
အော် အော် … ယောင်္ကျားတွေ ဂွင်း တိုက်တယ် ဆိုတာတော့ ကြားဖူးတယ် ဘယ်လိုလုပ်တာ လဲ မသိတာ အခု မှ သဘော ပေါက်တယ်အဲ့လို လုပ်တော့ ကောင်းလို့လားဟင် ကိုကြီး ´´ ကောင်းတာ ပေါ့ ဝါကလဲ ကိုကြီး တို့ စိတ်ထဲ ရှိတဲ့ မိန်းမ တစ်ယောက် ကို မှန်းပီး အဲ့လို ရှေ့တိုး နောက်ဆုတ် ဂွင်းတိုက်ရင်း အဲ့ဒီမိန်းမ ကို လိုးရတယ်လို့ မှန်းပီး လုပ်တာ ကြာကြာလုပ်လိုက်ရင် ခုနက ဝါ နဲ့ လိုးသလို ပဲ လီးရေ တွေ ပန်းထွက်သွားတာပေါ့ ´´
အော် အဲ့လိုလားးးး ´´ အင်း အခု ဝါ ကိုကြီး ကို အဲ့လို လုပ်ပေးကြည့်လေ ´´
အင်းးးလုပ်ပေးကြည့်မယ်နော် ´´ ၀ါဝါ က မင်းဇော် လီး ကို ကိုင်ကာ ရှေ့ တိုး နောက်ဆုတ် သူမလက်ကလေး နဲ့ ဂွင်းတိုက်ပေးတော့တယ် ။ အားးး ကောင်းတယ် ဝါရယ် အားးးး ဖြေးဖြေး အောက်ထိ တအားကြီး မဆွဲ နဲ့ ´´
အင်းးး ဒီလိုလားး´´ အင်း ဟုတ်တယ် ဖြေးဖြေး မှန်မှန်လေး အားးးဟုတ်တယ် ´´
ကြာကြာ မသင်ပေးလိုက်ရ ဝါဝါ ဂွင်း သေချာ တိုက်ပေးတတ်လာတယ်
ဝါ ဒီအတိုင်းကြီး ဆိုတော့ ပူတယ် နာတယ် တံတွေး လေး နဲနဲ လက်မှာ စွတ်ပီးလုပ် ´´ အာ ကိုကြီးကလဲ ရွံ့စရာကြီး ´´
ရွံ့ စရာ မဟုတ်ပါဘူး ဝါ ရဲ့ သူများတွေ ဆို လီးတောင် စုပ်ပေးကြသေးတာပဲ ဝါ့ မမ ဆိုလည်း ကိုကြီး လီး ကို စုပ်ပေးတာပဲ ဝါ့ အဖုတ် ကို လည်း ကိုကြီး ယက်ပေးတာပဲလေ ´´ ဟင် တကယ် ကိုကြီး လီးကြီး ကို မမ က စုပ်ပေးတယ်ပေါ့ ´´
အင်း ပေါ့ မယုံလို့လား မယုံ ရင် ညကျ ရင် ကိုကြီး အခန်း တံခါးလေး ဟ ထားမယ် လာကြည့် ´´ အာ ကြည့်ရဲဘူး မမ သိသွားမှာ စိုးတယ် ´´
မသိအောင် တိတ်တိတ်လေး လာပေါ့ ကိုကြီး အခန်းမီး ဖွင့်ပီး လုပ်မယ် လာကြည့်နော် ´´ အင်းးး ´´
မင်းဇော် လီးကို ကိုင်ကာ ဂွင်း ဆက်ထုပေးလိုက်သည် ။
ကိုကြီး ဟာကြီးက တဖြည်းဖြည်း ပိုပို ကြီးလာသလိုပဲနော် မာတောင့်တောင့်ကြီး
အင်းး စုပ်ကြည့်ပါလား ဝါ
ဟာ….. ကိုကြီးကလဲ ဝါမှ မစုပ်တတ်တာ
လာ ကိုကြီးသင်ပေးမယ် ပေး ဝါ့လက်လေး
မင်းဇော် က ဝါဝါ ရဲ့ လက်ချောင်းလေး ကို ဆွဲယူလိုက်ပီး သူ့ ပါးစပ်ထဲ ထည့်လိုက်တယ် ။ ပီးတော့ လျှာလေး နဲ့ပွတ်လိုက် စုပ်ပြလိုက် လုပ်ပြလိုက်တယ် ။ လီးတံကို စုပ်နေတဲ့ ပုံစံမျိုး ဝါဝါ့ လက်လေး ကို စုပ်ပေးလိုက်တယ် ။
အဲ့လိုလေး စုပ် ရလား လုပ်တတ်လား
အင်း .. လာ ထ ဝါ က အောက်ကနေ ထိုင် ကိုကြီး က ဆက်တီပေါ် မှာ ထိုင်ပေးမယ်
၀ါဝါ လည်း မင်းဇော် ရင်ခွင်ထဲမှ ဆင်းကာ အောက်မှာ ထိုင်လိုက်သည် ။ မင်းဇော် လီးတံ နဲ့ ဝါဝါ နုတ်ခမ်း နဲ့ တစ်တန်း တည်း ဖြစ်သွားတယ် ။ မင်းဇော် လီး ကို စုပ်ပေးဘို့ မဝံ့မရဲ ဖြစ်နေသည် ။
ငုံ့ လိုက်လေ ဝါ
အင်းးးး … ခေါင်းလေး ငြိမ့်ပြလိုက်ရင်း မင်းဇော် လဒစ်ခေါင်းကြီးအား ဝါဝါ နုတ်ခမ်းလေး အသာဖွင့်လိုက်ကာ ငုံကြည့်လိုက်သည်
အားးး နွေးသွားတာပဲ ဝါ ရယ် ခုနက ကိုကြီး လုပ်ပြသလိုလေး စုပ်ကြည့်လိုက်
၀ါဝါ က ခေါင်းလေး တစ်ချက် ငြိမ့်ပြလိုက်က လဒစ်ကို တပြွတ် ပြွတ် ဖြင့် စုပ်ကြည့်လိုက်သည်
လီးဒစ် တစ်ဝိုက်ကို လျှာဖျားလေး နဲ့ ရစ်သပ် ပေးလိုက်သည်
အားးးး ကောင်းတယ်ဝါ ဝါက တတ်လွယ်သားပဲ ကောင်းတယ် စုပ် လက်တစ်ဘက်က ကိုကြီး ဥတွေကို ကိုင်ထား လီးတံ အရင်း ထိ ဆွဲ စုပ်ပေး အားးး ကောင်းတယ်
သူမ စုပ်ပေးနေတာ ကို ကျေနပ်ကာ ကောင်းနေသည်ကို တွေ့လိုက်တော့ ဝါဝါ ပျော်သလိုလို ခံစားမိတယ် ဒီထက်ကောင်းအောင် စုပ်ပေးလိုက်ပစ်တယ်
အင်းးး အင်းးး ကောင်းတယ်ဝါ အားးးးရှီးးးးး
အောက်ကို ဝဲကျနေတဲ့ ဝါဝါ့ ဆံပင်တွေ ကို စုပီး ကိုင်ပေးလိုက်ကာ ဝါဝါ လီးစုပ်နေတာကို သေချာချာ ကြည့်လိုက်မိတယ် ။ လရေ၀င်ရင် အသေခင်တယ် ။ မိန်းမ စက်ပတ် တစ်ကြိမ် လီးဝင် နောက်ထပ် တစ်သက်စားမကုန် ။ ခယ်မ ဆိုတာ လိုက်ပွဲ ။ ဆိုတာလေးတွေ တွေးကြည့်လိုက်တော့ လည်း ဟုတ်သလိုလို ပဲ လို့ မင်းဇော် တွေးမိလိုက်တယ် ။ အကြိမ်ကြိမ် လိုးချင်စိတ်တွေကို ထိန်းခဲ့ရတာ ဒီနေ့တော့ ခယ်မလေး ဝါဝါ အလိုးခံရုံတင်မဟုတ် သူ့လီးကို အားရပါးရ စုပ်ပေးနေပီ ။ ဝါဝါ စုပ်ပေးနေမှ လီးတံ ကြီးကလည်း ပိုပို တောင်လာသလိုလို ရှိလာသည် ။
ကောင်းတယ်ဝါ …အားးး အောက်က ဥလေးတွေကို ပါ ယက်ကြည့်
ပါးစပ်ထဲ မှ လီးတံကို ချွတ်လိုက်ပီး အောက်က ဥလေးတွေကို ယက်ကြည့်လိုက်သည် ။ ပျော့စိစိလေး နဲ့ အသည်းယားစရာ ။ လျှာဖျားလေး နဲ့ အလျားလိုက် ယက်ကြည့်သည် ။ ဥလေးတွေကို ငုံစုပ်ကြည့်သည်
ပလက် ပလက် ပလက် ပြွတ်
ကောင်းလား ကိုကြီး ဝါဝါက ခေါင်းလေး အသာမော့ပီး မေးလိုက်သည် ။
အရမ်းကောင်းတယ် ဝါ … ဝါ့ အကျီတွေ ချွတ်လိုက်ကွာ ကိုယ်လုံးတီးလေး နဲ့ ကိုကြီး လီး စုပ်နေတာလေး ကြည့်ချင်တယ်
ကိုယ်ပေါ်က စွပ်ကျယ်လေးကို ချွတ်လိုက်ရင်း ပြောလိုက်သည်
ကိုကြီး ချွတ်ပေး ….
အင်းး… ထ ဝါဝါ ကို ဆွဲ ထူလိုက်ပီး အကျီရော ထမိန်ရော ချွတ်ပေးလိုက်သည် ။ ဝါဝါက နို့တွေကို လက်တစ်ဘက်နဲ့ ကာထားပီး နောက်လက်တဘက်က အဖုတ်လေး ကို အုပ်ထားသည်
လက်ကြီး မကာထားပါနဲ့ ဝါရယ်
မရှက်ပါနဲ့ ဝါ ရယ် ခန က ပဲ တခါ လိုးပီးသား ကို ဝါ့ ကို အခုလို ကိုယ်လုံးတီးလေး နဲ့ စိတ်ထဲ မှာ ခနခန မြင်ယောင်ကြည့်နေခဲ့တာ အခု လို မြင်ရတော့ စိတ်ထဲ တွေးထားတာ ထက်တောင် လှနေသေးတယ်
တကယ်လားးး အာ့ ဆို ဝါ ကျေနပ်တယ် …
လက်လေးတွေ ကို ဖယ်ပေးလိုက်ပီး မင်းဇော် နုတ်ခမ်းလေး ကို ဝါဝါ လှမ်း နမ်းပေးလိုက်တယ် ။ နှစ်ယောက်သား မတ်တပ်ရပ်ရင်း တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ဖက်ကာ အနမ်းတွေ ဖလှယ်လိုက်ကြည် ။
ထို့နောက် မင်းဇော်က ဝါဝါ ရှေ့မှာ ထိုင်ချလိုက်တော့ မင်းဇော်မျက်နှာနဲ့ ဝါဝါ အဖုတ်က တစ်တန်းတည်း ဖြစ်သွားသည် ။ တင်ပါး နှစ်ဘက်ကို လှမ်းကိုင်ကာ အဖုတ်ကို လျှာနဲ့ ယက်ပေးလိုက်သည်
အားးး ကိုကြီး ရယ်
ပေါင်လေး အနည်းငယ် ကားလိုက်ကာ မင်းဇော် ခေါင်းကို ကိုင်လိုက်ရင်း အဖုတ်လေး ကို ကော့ပေးလိုက်မိသည်
အားးးး ရှီးးးး ကိုကှီးးးး
ပြွတ် ပြွတ် ပလက် ပြွတ်
အားးး အမလေးးးး အားးးး
အ အ အ အ ကောငှးတယကှိုကှီး အ ဟူးးးးး အားးးး
ပြွတ်ြ ပွတ် ပြွတ်
အားးး ကိုကြီး အားး ချစ်တယ်ကွာ အားးးး
မင်းဇော်က အဖုတ်ကို ယက်နေရင်းမှ ဝါဝါ့ ကို ကိုယ်တစ်ပါတ် လှည့်စေလိုက်ကာ ဝါဝါ့ တင်ပါးနှစ်ခြမ်း ကို နေရာ အနှံ နမ်းပေးလိုက်သည် ။ ထို့နောက် တင်ပါး နှစ်ခြမ်းကို ဖြဲလိုက်ကာ တင်ပါး နှစ်ခြမ်းကြား လျာ အပြားလိုက် ထည့်ရင်း အထက်အောက် ယက်ပစ်လိုက်သည်
အားးး ကိုကြီး အာ့ ဖင် …ဖင်ကြီး အားးးး
ပြွတ် ပြွှတ် ပြွတ်
၀ါဝါ့ ဒူးတွေ မခိုင်ချင်သလို ဖြစ်လာကာ ရှေ့မှ ဆက်တီ စားပွဲ ပေါ် လက်လှမ်းထောက်လိုက်သည်မို့ မတ်တပ်ရပ်ကာ ဖင်ကုန်းပေးလိုက်သည့် အနေ အထားဖြစ်သွားသည် ။ ပေါင်ကလည်း ပိုကား လာပီး နောက်မှ မင်းဇော်က တင်ပါး နှစ်ခြမ်းကြား အသားကုန် ယက်ပေးတော့သည်
ပြွတ် ပြွတ် ပြွတ် ပြွတ် ပြွတ် ပလက် ပလက် ပြွတ်
အားးး ကိုကြီး ရယ် ချစ်တယ်ကွာ အားးးး
ညိုတိုတို စအိုပေါက်လေးမှာ လည်း ပွစိပွစိဖြင့် မင်းဇော် ရဲ့ လျာအောက် ရောက်နေရသည်
အားးး ကိုကြီး တက်လိုးပါတော့ အားးး ဝါ မနေတတ်တော့ဘူး အားးး အမလေးးးး
အင်းးး ဝါ အဲ့ဒီအတိုင်းနေ ခါးလေး နဲနဲခွက်ထား ဆက်တီစားပွဲကို သေချာကိုင်ထားနော် ကိုကြီး နောက်က နေ မတ်တပ်ရပ်ပီး လိုးမယ်
မင်းဇော်လည်း ဝါဝါ နောက်မှ နေရာ ယူလိုက်ပီး လီးတံကို အဖုတ် ၀ မှာ တေ့လိုက်သည် ။ အိမ်ရှေ့ ဧည့်ခန်းမှာ တင် နှစ်ယောက်သား ကိုယ်လုံးတီး ချွတ်ပီး ခယ်မလေး ရဲ့ ဖင်ကို ကျကျ နန ကိုင်ကာ အဖုတ်ထဲ လီး ထိုးသွင်းလိုက်သည်
အရည်တွေ ထွက်နေတယ် ဆိုပေမယ့် အဖုတ်ထဲ လီးဝင်သွားသည်မှာ စီးစီးပိုင်ပိုင် ရှိလှသည် ။ မန္တလေးထိုးမုန့်ကို ရေခဲသေတ္တာထဲ ထည့်ထားပြီးမှ ကိုက်ဝါးလိုက်သည့်ပမာ အိစိစိ ဖြင့် သွားဖုံးမြုပ်သွားသလို ခံစားလိုက်ရသည် ။
အားးး ဝါ့ အဖုတ်လေး က ကြပ်ကြပ်လေး အီးးးး အားးးးး
အားးး ကောင်းတယ် ကိုကြီး ခုနက လိုးတာ ထက်ကောင်းတယ် ဝါ ခံနိုင်တယ် ဆောင့်ပေး
ဗျစ် ဗျစ် ဖွတ် ဖွတ် ဖွတ် ဖွတ်
အင့် အင့် အင့် ရော့ ရော့ အားးးး
မိန်းမ မရှိစဉ် အိမ်မှာ ခယ်မ နဲ့ ခဲအို ရဲ့ လိုးသံတွေ အော်သံတွေက ဆူညံထွက်နေသည်
တင်ပါးတွေကို ဖျစ်ညှစ်လိုက် နို့တွေ ကို လှမ်းဆွဲလိုက်ဖြင့် စည်းချက် ညီညီ ဆောင့်လိုးပေးနေလိုက်သည် ။
အအ အ အ အ အားးး ရှီးးး
ခယ်မလေး ကို ကိုယ်လုံးတီး ချွတ်ပီး လိုးနေရတဲ့ အရသာ ကြောင့် မင်းဇော်လီးက အပြတ်အသတ် မာထန်နေသေည် ။
ဒုတ် ဒုတ် ဖုတ် ဖုတ် ဖတ် ဖတ်
အ အ အားးး ကောင်းတယ် အားးး ဆောင့်ပါ အားးးး
အားးး အားးးးးးး အမလေးးးး
အချက် နှစ်ဆယ်ကျော်လောက် ထပ်ဆောင့်လိုက်ပီး လီးတံကို ချွတ်လိုက်သည် ။ ထို့နောက် ဝါဝါ့ကို ဆွဲ ထူလိုက်ကာ မင်းဇော်ရှေ့မှာ ဒူးထောက်ခိုင်းလိုက်ပြန်သည် ။
အာ ကိုကြီး လီးမှာ အရည်တွေ နဲ့
ဝါ့ စောက်ဖုတ်က အရည်တွေပဲ ဘာလဲ ရွံလို့လား ကိုကြီး ဝါ့ အဖုတ်ကို ယက်တော့တောင် အရည်တွေ ပေသေးတာပဲ ယက်ပေးနော်
မင်းဇော် ပြောလိုက်တော့လည်း ဟုတ်သလိုလို ။ ဟုတ်တယ် ကိုယ့် အဖုတ်က ထွက်တဲ့ အရည် ဘာရွံ့ ရမှာလဲ လို့ စိတ်ထဲ တွေးလိုက်ပီး မင်ဇော် လီး ကို ဆွဲ စုပ်ပစ်လိုက်သည် ။
အားးး ကောင်းတယ် ချစ်လေး ရယ်
ပြွတ် ပြွတ် ပြွတ် ပြွတ် ပြွတ် ပြွတ် ပြွတ်
အု အု ခေါင်းလေးငြိမ့်ပီး ပြန်ဖြေသည် ။ ပါးစပ်ထဲ လီး ရောက်နေသည်မို အု ..အု ဖြင့်သာ အသံထွက်လာသည် ။ မင်းဇော်လည်း ဝါဝါ့ ခေါင်းလေးကို ကိုင်လိုက်ပီး ပါးစပ်ထဲကို အဖုတ်လိုးသလို ဖြေးဖြေးလေး အသွင်း အထုတ်လုပ်ပေးလိုက်သည် ။
ပလွတ် ပလွတ် ပလွတ် ပလွတ်
အားးး ကောင်းလိုက်တာ ဝါ ရယ်
ပါးစပ်ထဲမှ လီးကို ဆွဲထုတ်လိုက်ပီး ဝါဝါက မော့ ကြည့်ကာ
အသက်ရှူကြပ်လာပီ ကိုကြီး …
မေ့စေ့မှာ လရေတွေရော သွားရေ တွေရော ပေကျံနေသည် ။
၀ါဝါ့ ကို ဆွဲထူလိုက်ပီး နုတ်ခမ်းလေး ကို အသာ စုပ်နမ်းလိုက်သည် ။ ထို့နောက် ဝါဝါ့ ပေါင်တစ်ချောင်း ကို လက်တစ်ဘက် ဖြင့် မလိုက်သည် ။ ခြေထောက်တစ်ချောင်းက ခပ်ကွေးကွေးလေး အပေါ်သို့ ပါလာသလို နောက်တစ်ဘက်က ခြေဖျားလေး ထောက်လာသည် ။ လက်တွေက မင်းဇော် လည်ဂုတ်ကို သိုင်းဖက်ထားလျှက်သား ။ မင်းဇော် လည်း လီးတံကို အဖုတ်ထဲ ထိုးသွင်းလိုက်က လက်ကို တင်ပါးတွေပေါ် တင်ထားလိုက်ပီး ထိန်းပေးကာ မတ်တပ်လိုးသည့် အနေအထား ဖြစ်အောင်လုပ်ကာ ဖြေးဖြေးချင်း ညှောင့်ပေးလိုက်သည်
တင်ပါးတွေကို ဖျစ်ညှစ်ပေးရင်း ဆောင့်ဆောင့် လိုးပေးလိုက်သည်
အားးး ကောင်းတယ် ကိုကြီးရယ် မျက်လုံးလေး မှေးစင်းကာ မင်းဇော် နုတ်ခမ်းတွေကိုမမှီ တမှီ လှမ်းဆွဲစုပ်သည် ။ မတ်တပ်ရပ်လိုးတာ ကြာကြာတော့ မလိုးနိုင် ဆယ်မိနစ်လောက် နေတော့ ဒူးတွေ ညွှတ်ချင်လာသည်မို့ ဝါဝါက ကြမ်းပြင်မှာ လေးဘက်ကုန်းလိုက်ပီး မင်းဇော်က နောက်မှ ဒူးထောက် အနေအထားဖြင့် ဆက်လိုးသည် ။ အပျိုဖြန်းလေး ဝါဝါ မှာ မင်းဇော်ရဲ့ လီး အရသာ ကို တွေ့ရှိသွားပီး ဖင်ကြီးကို ထောင်နေအောင် ကုန်းပေးရင် အလိုးခံသည် ။ မင်းဇော်ကလည်း ဝါဝါ အဖုတ်ကို လိုးနေရင်းမှ ဖင်ပေါက်လေးကို လည်း လက်မလေး ဖြင့် ပွတ်ပေးနေသဖြင့် ဝါဝါတစ်ယောက် လူးလှိမ့် ခံစားနေရသည် ။
အ အ အ အ အားးး
အင့် အင့် အင့် ဘွတ် ဘွတ် ဘွတ် ဖတ် ဖတ်
အားးးးး ကိုကြီး ဝါ ပီးတော့မယ် အရမ်းကောင်းနေပီ ဆောင့်လိုးပေး အ အ အားးးး
အင့် အင့် အင့် ဖတ် ဖတ် ဖတ် ဖတ်
အ အ အ အ အားးးးး
အချက်နှစ်ဆယ်လောက် ဆက်တိုက် ဆောင့်လိုးပေးလိုက်ပီး ဝါဝါ့ဖင်ကြီးတွေကို မင်းဇော်လီးတံ အဆုံး ဖိသွင်းကပ်ထားလိုက်ကာ လရေတွေဖြောကနဲဖြောကနဲ ပန်းထုတ်လိုက်လေတော့သည် ။ ဝါဝါ အပေါ်မှာ မင်းဇော်က ထပ်လျှက် ကြမ်းပြင်ပေါ် လဲကျသွားလေသည် ။ မင်းဇော်လီးတံကြီးက ဝါဝါ့ ဖင်ကြားထဲမှာ ကပ်လျှက် နှစ်ယောက် အသက်ရှူသံတွေက မြန်ဆန်နေကြပီး အတိုင်းသား ကြားနေရသည် ။ အပျိုမလေး ဝါဝါ .. ခဲအိုဖြစ်သူ အား ပန်းဦးချွေခွင့် ပြုလိုက်သလို ခယ်မလေးအား မယားငယ်အဖြစ်သို့ ဆွဲဆောင်နိုင်ခဲ့သဖြင့် မင်းဇော် အကျေနပ်ကြီး ကျေနပ်မိလေသည် ။ ညနေဘက် ဇနီးဖြစ်သူ ဝေမာလှိုင် ပြန်လာတော့ ဝါဝါနဲ့မင်းဇော် အေးဆေးတည်ငြိမ်စွာပင် ဘာမှ မဖြစ်ခဲ့သလို နေခဲ့ကြသည် ။ ညစာစားပီး ကျတော့ တစ်နေကုန် လိုးဆော်ထားသဖြင့် ဇနီးဖြစ်သူ ဝေမာလှိုင်အား မလိုးနိုင်တော့ ပင်ပန်းနေလို့ ဟု အကြောင်းပြကာ စောစောစီးစီး အိပ်ပျော်သွားသည် ။ ဇနီး ဖြစ်သူ ဝေမာလှိုင်ကတော့ မသိချေ ။ မနက်လေးနာရီခွဲလောက်မှာ အိပ်ရေးဝ ကာ နိုးလာပီး အပေါ့အပါး ထသွားလိုက်သည် ။ ငပဲက လည်း အားအင်ပြည့်ကာ ထောင်မတ်နေသည် ။ အပေါ့သွားပီး ကုတင်ပေါ် ပြန်တက်လာကာ ဇနီးဖြစ်သူ ဝေမာလှိုင် ရဲ့ စောင်ခြုံလေးထဲ ပြန်ဝင်လိုက်ရင်း ဝေမာလှိုင်အား ဖက်ခွလိုက်သည် ။ ဝေမာလှိုင် ကိုယ်လုံးလေး လူးလာကာ မျက်လုံးလေး ဖွင့် ရင်း
မောင် … နိုးနေတာလား
အင်းး ညက စောစာ အိပ်ပျော်သွားလို့ နိုးလာတာ အပေါ့ထသွားတာ
နဖူးလေးအား အသာလှမ်းနမ်းလိုက်ကာ တင်ပါးလေးကို လက်တစ်ဘက် နဲ့ ပွတ်ပေးလိုက်သည်
ဝေမာလှိုင်ကလည်း ခေါင်းလေးကို ရင်ခွင်ထဲ တိုးဝင်လိုက်ကာ မင်းဇော်ကို ပြန်ဖက်ထားလိုက်လေသည် ။
လွမ်းလိုက်တာ ဝေ ရယ်
ဟွန်းးး အပိုတွေ လေးရက်လေး ခရီးသွားတာ ကိုများ
ဂါဝန်စလေးကို အပေါ်သို့ ဆွဲယူလိုက်ကာ ဝေမာလှိုင် တင်ပါးလေးတွေကို ပွတ်ရင် ဖင်အကွဲကြောင်းကြား လက်လေး နှိုက်ကာ ပွတ်ပေးလိုက်သည်
ပိုပိုကြီး ဟွန်းးးး ညကတော့ တန်းအိပ်ပျော်သွားပီးတော့များ
ည က ပင်ပန်းနေလို့ပါ
ခေါင်းလေး မော့လာတဲ့ ဝေမာလှိုင် နုတ်ခမ်းလေး ကို ဆွဲယူ နမ်းလိုက်သည်
ဝေမာလှိုင်က လည်း အနမ်းလေး ပြန်ပေးလိုက်ရင်း
သိပါတယ်ဝေရယ် အခုတောင် ခနလေး ပွတ်ရသေးတယ် ဝေ့ အဖုတ်လေးက စိုနေပီမလား
မောင့်လီးလည်း တောင်နေပီဝေ လင်းဆွဲလေး ဆွဲရအောင်လေ
ဘယ်သူက မဆွဲချင်ဘူး ပြောလို့လဲ မောင့်သဘော အကုန်လိုက်လျောခဲ့တာ မောင်နဲ့ မယူခင်ကတည်းကလေ
ဟုတ်ပါသည် ။ လွန်ခဲ့သည့် နှစ်နှစ်ကျော် သုံးနှစ်လောက်က မင်းဇော် နဲ့ ဝေမာလှိုင် ချစ်သူတွေ ဖြစ်ပီး တစ်ပတ် အကြာမှာပင် မင်းဇော်နေသော တိုက်ခန်းလေးတွင် ဝေမာလှိုင်ရဲ့ ပန်းဦးကို ချွေခဲ့တုန်းက လည်း လိုက်လိုက်လျောလျော ပေးခဲ့တာပါ ။ ကျောင်းကအပြန် သွားကြိုရင်း မင်းဇော်တိုက်ခန်းလေးကို ခေါ်လာကာ အဖြူအစိမ်းယူနီဖောင်းလေး နဲ့ ဝေမာလှိုင်ကို ပန်းဦးခြွေခဲ့တာလေး ပြန်မြင်ယောင်လာမိသည် ။
ဝေနဲ့မောင် ရဲ့ ပထမဆုံး နေ့လေးကို တောင် ပြန်မြင်ယောင်လာမိတယ် ဝေ
အင်းးး အဲဒီတုန်းကတည်းက မောင့်အကြိုက်ကို ငြင်းခဲ့ဖူးလို့လား ပြော
သိပါတယ် ဝေ ရယ် ဒါကြောင့် ဝေ့ကို ချစ်နေရတာ
စကားပြောရင်း ဝေမာလှိုင်က မင်းဇော် လီးတံ ကို ဆွဲယူကာ ပွတ်ပေးနေသည် ။
တခါမှ မစဉ်းစားခဲ့ဖူးတာတွေ ကို မောင်နဲ့မှ ပထမဆုံးကြုံခဲ့ရတာလေ
မောင့်လီးကို စုပ်ခဲ့တာ ကို ပြောတာလား
အင်းလေ .. အရင်က ယောင်္ကျား မိန်းမ လိင်ဆက်ဆံတယ်ဆိုတာ အဖုတ်ထဲ လီးထိုးထည့်ရုံလောက်ပဲ သိတာ မောင်နဲ့ ကျမှ အဖုတ်လည်း ယက်ခံရတယ် လီးလည်း စုပ်ပေးရတယ် ဟွန်းးး ဝေလေ မောင့်ကို ချွတ်လွန်းလို့ တန်ဖိုးထားလွန်းတဲ့ ကျောင်းစိမ်းဝတ်စုံလေးကို တောင် အားနာမိတယ်
အဲ့ဒီကတည်းက ဝေ့ ကို ဆွဲသွားတာ မစုပ်တတ်စုပ်တတ် နဲ့ မောင့်လီး ကို ကျောင်းစိမ်းဝတ်စုံလေး နဲ့ စုပ်နေတာလေး အခု ထိ မြင်ယောင်နေတုန်းပဲ
မှတ်မှတ်ရရ မောင်နဲ့ မယူခင် အပြင်မှာ တွေ့ပီး အလိုးခံခဲ့တာ စုစုပေါင်း ဆယ့်လေးကြိမ်နော် မှတ်မိရဲ့လား
မောင်က ဝေ နဲ့ မတွေ့ခင်ရည်းစားတွေ ထည်လည်းတွဲပီး အတွေ့ အကြုံတွေ အများကြီးရှိပေမယ့် ဝေ့ဘ၀မှာတော့ မောင်က ပထမဆုံးပါနော်
အင်းပါ ဝေ ရယ် မောင့်ရဲ့ ရည်းစား ဟောင်းတွေ အတိတ်မှာ ထားခဲ့ပါပီ အခုတော့ ဝေမှဝေပါပဲနော်
အင်းပါ မောင့်ရဲ့ နောက်ဆုံး ဖြစ်ရတာ ကို ဝေ ကျေနပ်ပါတယ်မောင်ရယ် ဒါပဲနော် ဝေ့အပြင် နောက်ထပ် ရှိလာလို့ကတော့ ဝေနဲ့ အသိပဲ
မောင် အလိုကျ မောင်နဲ့အပြင်မှာ တွေ့မယ်ဆိုတိုင်း မောင် စေခိုင်းခဲ့လို့ ကျောင်းစိမ်း ၀တ်စုံလေး တစ်စုံ အပိုယူလာရတယ်လေ ဟော်တယ် အခန်းထဲ ရောက်တိုင်း မောင့်ရှေ့မှာ ပဲ ကျောင်းစိမ်း ၀တ်စုံလေး ၀တ်ပြခဲ့ပီး အလိုးခံခဲ့တာ မောင့် ကို အရမ်းချစ်လွန်းလို့ အလိုလိုက်ခဲ့တာလေ
ဟုတ်ပါသည် ။ မင်းဇော် အနေနဲ့ ကျောင်းစိမ်း ၀တ်စုံ ၀တ်ပီး လိုးရတာ ကို အရမ်း သဘောကျခဲ့သည် ။ ဝေမာလှိုင်နဲ့ မယူခင် ဟော်တယ် မှာ အကြိမ်ကြိမ် လိုးခဲ့သည်။ ဟော်တယ် သွားတိုင်း မင်းဇော် ရဲ့ တောင်းဆိုမှုကြောင့် ဝေမာလှိုင်က ဆရာမ ၀တ်စုံလေး ၀တ်ပီး အလိုးခံခဲ့သည် ။ မင်းဇော် အကြိုက် အမြဲလိုက်လျောခဲ့သည် ။
မောင့်မိန်းမက ကျောင်းဆရာမ ၀တ်စုံလေး နဲ့ဆို ဆက္ဆီအရမ်းကျပီး လှပနေတော့ မောင့် စိတ်တွေ ကို ဖမ်းစားနိုင်လွန်းလို့ တောင်းဆိုခဲ့တာပါ
ဟုတ်ပါသည် ။ ဝေမာလှိုင်က ခါးသေး ဖင်ကြီး မင်းကြီးပုံ ဘော်ဒီမျိုးမို့ ကျောင်းစိမ်း ခါးတိုရင်ဖုံး အဖြူလေးနဲ့ ထမိန်အစိမ်းလေး ကို ခပ်ကြပ်ကြပ် ၀တ်ထားလိုက်လျှင် ပေါ်လွင်နေတဲ့ ခန္ဓာကိုယ် အချိုးအစားက မြင်သူတွေ နှစ်ခါပြန်ငေးရတယ်လေ ။ ဖင်နှစ်ခြမ်းကြားထဲ လက်ကလေး ပွတ်ဆွဲ ရင်း စကားတွေ ပြောနေရတာလဲ ဖီလ်း တစ်မျိုးပဲ ။ အဖုတ်မှာ အရည်တွေ စိုရွဲနေပီ ။
မောင် လုပ်ချင် လုပ်တော့လေ တော်ကြာ မိုးလင်းတော့မယ်
မောင် ဒီလောက် စွ နေမှတော့ ခံချင်နေပီးပေါ့လို့
ဒါဆို ထ .. လေးဘက်ကုန်းလိုက်
မင်းဇော် ရင်ခွင်ထဲ မှ ထွက်လိုက်ကာ ညအိပ်ဂါဝန် ကို လည်း ခေါင်းပေါ်မှ ချွတ်လိုက်ပီး လေးဘက်ထောက်လိုက်သည် ။ အခန်းက ညဘက် မှောင်နေသဖြင့် နံရံမှ မီးခလုတ်ကို ဖွင့်လိုက်သည် ။ အ၀တ်အစားတွေ အကုန်ချွတ်လိုက်ပီး ဝေမာလှိုင် ၏ အနောက်ဘက် တွင် ဒူးထောက်ကာ နေရာယူလိုက်သည် ။
ဝေမာလှိုင် တင်ပါးနှစ်ခြမ်းကို ရိုက်လိုက်သည်
မိန်းမ ဖင်က မြင်လိုက်တိုင်း စိတ်ထတယ် တင်းပီး အယ်ထွက်နေတာပဲ ဝေ ရယ်
မောင်ပိုင်တာပဲ ကြိုက်သလိုလုပ်လေ မကြိုက်ဘူးလား
ကြိုက်တာပေါ့ ဝေ ရယ်
အဖုတ်ဝ မှာ လီးတေ့လိုက်ကာ စွပ်ကနဲ ထိုးသွင်းလိုက်သည်
အ … မောင်ကလဲ ဖြေးဖြေး
အင့် အင့် အင့် ဘွတ် ဘွတ် ဘွတ် ဘွတ် ဖတ် ဖတ် ဖတ် ဖတ်
အားးးး အမလေးးး မောင် ဖြေးဖြေးလေ အားးးး
အားးး မအောင့်နိုင်တော့ဘူးကွာ တအားဆောင့်မယ် စိတ်တွေ တအားဖြစ်လာပီ အင့် အင့် အင့်
အားးး အမလေးးး မောင် အားးးး အီးးးး
ဝေမာလှိုင် ခါးလေး ကော့တတ်လာသည် ။ မင်းဇော်ကလည်း ဝေမာလှိုင် နို့ တွေကို လှမ်းဆွဲ ရင်း နောက်ကနေ အားကုန်ဆောင့်လိုးသည်
ဘုန်း ဘုန်း ဘုန်း ဘွတ် ဖွတ် ဖတ်
အင်း အင်းး အားးးး
အဆက်မပြတ် ဆောင့်ချက်တွေက ထိမိလွန်းလှသဖြင့် ဝေမာလှိုင်လည်း စိတ်တွေ ထန်လာရသည် ။ မင်းဇော် က လီးတံ က လည်း ရှည်သည်မို့ သားအိမ်ခေါင်း ထိ ရောက်သည် ။ မင်းဇော်လီးတံက အဖုတ် အတွင်းသား နံရံ တွေ ကို ပွတ်စွဲ သွားတဲ့ အရသာ က ဝေမာလှိုင် အနေဖြင့် ဘယ်နှကြိမ် ခံခံ အရသာ ကောင်းလွန်းနေသည် ။ ဖင်ကြီးကို ကော့ ကာ နောက်ပြန် ဆောင်ပေးမိသည် အထိ စိတ်တွေ ထန်လာရသည်
ဖွတ် ဖွတ် ဖွတ် ဖွတ်
အားးးး ရှီးးး ကောင်းတယ်မောင် အားးး အမလေးးးး
အင့် အင့် အင့် ကြိုက်လား ဝေ
အင်းးး ကြိုက်တယ် မောင် အားးး ဆောင့်ပါ အားရပါးရဆောင့် အားးး အမလေးးး
အင့် အင့် အင့် ရော အားးး မောင့်မိန်းမ ဆရာမလေး ကို မောင်လိုးပေးနေပီ
အားးး ကြိုက်တယ်မောင် လိုးပါ အားးး ဝေ အဖုတ်ကို မောင့် စိတ်ကြိုက်လိုးစမ်းပါ အားးး ယောင်္ကျားး အမလေးးးးလေးးး
ကျောင်းမှာသာ အိနြေ္ဒရရနှင့် နေသော ကျောင်းဆရာမလေး တစ်ယောက်ပေမယ့် အလိုးခံတဲ့ အချိန် စိတ်တွေ ထန်လာရင် အဖုတ်တွေ လီးတွေ လိုးတာတွေ ဆောင့်တာတွေ ကို အားရပါးရ ပြောတတ်သည် ။ အလိုးခံနေရချိန်ဆို ဝေမာလှိုင် စိတ်တွေ လေထဲ လွင့်နေသလို ခံစားရသည် ။ ဆယ်မိနစ်သာသာလောက် သူဆောင့် ကိုယ်ဆောင့် နဲ့ ကုတင်ကြီးကလည်း တကျီကျီ မြည်ကာ ယိမ်းခါနေသလို ဖြစ်နေသည် ။
မောင် မောရင် ပက်လက်လှန်လိုက်လေ ဝေ အပေါ်ကနေ တက်ဆောင့်ပေးမယ်
မင်းဇော်လည်း ပက်လက်လှန်ပေးလိုက်သည် ။ ဝေမာလှိုင်ကလည်း အပေါ်က တက်မဆောင့်ခင် လီးတံကို ကုန်းစုပ်လိုက်သေးသည် ။ ထို့နောက်လီးတံကို လက်တစ်ဘက်နှင့် ကိုင်က အဖုတ်ဝမှာတေ့လိုက်ပီး ဖြေးဖြေး ချင်းထိုင်ချလိုက်သည်
အားးး ကျွတ် ကျွတ် အားးး ရှီးးးး
ဖွတ် ဘလွတ် အားးး
လီးတံ အရင်းထိ ထိုင်ချလိုက်ပီး မင်းဇော် ရင်ဘတ်လေးပေါ်တွင် လက်ထောက်လိုက်က ဖင်လေး ကြွကာ ကြွာကာ ဖြင့် ဆောင့်တော့သည် ။
ဖွတ် ဖတ် ဖွတ် ဖတ် ဖတ်
အားးး အငှးးး အီးးးး ရှီးးးးး
မင်းဇော်ကလည်း အောက်ကနေ ညှောင့်ပေးသည်
ဝေမာလှိုင်က လီး အရင်းထိ ထိုင်ချလိုက်ကာ အထုတ်အသွင်း မလုပ်သေးပဲ စကောဝိုင်း သဖွယ် ခါးလှုပ်ကာ ဖင်သားလေး ရမ်းပေးလိုက်သည် ။ စောက်စိ က မင်းဇော် ဆီးခုံနဲ့ ဖိကပ်မိနေပီး ကြိတ်ပွတ်နေသလို ဖြစ်တာမို့ ဝေမာလှိုင် ဖီးလ် အရမ်းတက်လာသည် ။
အီးးးး အားးးး အင့်အင့်အင့် အားးး မောင်ရေ အားးးး ရှီးးးးး အင့်ကွာ အင့် အင့် အင့် အားးးး
ဝေမာလှိုင် နို့သီးခေါင်းတွေကို လှမ်းဆွဲကာ ချေပေးလိုက်သည်
မွှေလိုက်စမ်း ဝေ အားးး ကောင်းတယ်
အင့် အင့် အင့် အားးးး
ဇှိ ဇှိ ဇှိ … အားးးး
အားးး စောက်စိက တအားယားလာတယ်မောင် အားးးး ရှီးးးး အင့် အင့် အင့်
အားး မိန်းမ အားး ပွတ် ကွာ အင့် အင့်အင်းးးး အားးး
အားးး မောင် … ဝေပီးတော့မယ် ထင်တယ် အားးးး
အင်းးးး အားးးရတယ်ဝေ ပီးချင်ပီးလိုက် အားးးး
အစိ နဲ့ ဆီးခုံ ကို အတင်းဖိကပ်ကာ ပွတ်ဆွဲရင်း ဝေမာလှိုင် စိတ်တွေ မထိန်းနိုင်တော့ပဲ ပြီးမြောက်ခြင်း အထွဋ်အထိပ်ကို ရောက်ရှိသွားတော့တယ် ……
အားးး မောငရှေ အားးး ဝေ ပီးသှားပီ အားးးး ရှီးးးးး ဟူးးးးးးးးး
မောင် မပီးသေးဘူးနော် ဘာလုပ်ပေးရမလဲ သိတယ်မလား
ဝေမာလှိုင်က ခေါင်းလေး ငြိမ့်ပြရင်း စောက်ဖုတ်ထဲမှ လီး ကို ချွတ်လိုက်ကာ ဘေးနားမှာ ကုန်းလိုက်ပီး လီးတံကို ဆွဲစုပ်ပေးတော့တယ် ။ လီးတံမှာ သူမ စောက်ရည်တွေ ပေပွရွဲနစ်နေတယ် ။
အားးးး ကောင်းတယ် မိန်းမ ပီးအောင်စုပ် ဆက်တိုင်စုပ် အားးးး
အု အု အု ပြွတ် ပြွတ် ပလွတ် ပလက် ပလက်
အင့် အင်းးးး အားးးး ရှီးးးး ကောင်းတယ် စုပ်
အားးး ကောင်းတယ် ပီးတော့မယ် ဝေ စုပ်စမ်း ကြမ်းကြမ်းလေးးး အားးးး
အု အု အု ပြွတ် ပြွတ် ပလွတ် ပလက် ပလက် ပြွတ် ပြွတ် ပြွတ် ပလက် ပလက် ပြွတ်
အားးး ကောင်းတယ် အ အ အ အ အားးး ရှီးးးး
ဝေမာလှိုင် ခေါင်းကို အတင်းဆွဲကိုင်ပီး လီးကို ပါးစပ်ထဲ အဆုံးထိ ထိုးထည့်လိုက်ရင်း
အားးးး ဝေ …. အားးး ရှီးးး အားးးး ထှကပှီ အားးးးး
ဝေမာလှိုင် ပါးစပ်ထဲကို လရေတွေ ဖျောကနဲ ဖျောကနဲ ပန်းထုတ်လိုက်လေတော့သည်
ပြွတ် ဂလု ပြွတ် ပြွတ်
ကောင်းလိုက်တာ ဝေ ရယ်
ပါးစပ်ထဲမှ လီးကို ချွတ်လိုက်ပီး လရေတွေ ကို လျာနဲ့ ယက်လိုက်ပီး ပါးစပ်ထဲက လရေတွေ ပါ မျိုချလိုက်တယ်
ကောင်းလိုက်တာ မောင်ရယ် အရည်တွေ အများကြီးပဲနော်
မနက်ခင်း မောနီးလေးမှာ ဝေ အားပြည့်တာပေါ့ လရေ ကြိုက်တယ်မလား အားဆေးလေ
ဝေမာလှိုင်က နှာခေါင်းလေး ရှုံ့ ပြလိုက်ပီး မင်းဇော် ရင်ခွင်ထဲကို တိုးဝင်လိုက်တယ် ။ ထိုအချိန် အခန်းဝမှ ခန်းဆီးလေး ကို အသာချလိုက်ကာ ခြေဖျားလေး ဖော့ကာဖြင့် ထွက်ခွာသွားတဲ့ ဝါဝါ့ ကို နှစ်ယောက်လုံး သတိ မပြုမိလိုက်ချေ ……….